Coronavirus: Wiil Soomaali ah oo laga helay cudurka oo ka walwalsan Soomaalida kale ee aan isbaarayn - BBC News Somali
Coronavirus: Wiil Soomaali ah oo laga helay cudurka oo ka walwalsan Soomaalida kale ee aan isbaarayn
22 Maarso 2020
Dalka Jarmalka waxaa uu ka mid yahay dalalka ku yaal qaaradda Yurub ee la daalaa dhacaya dhibaatada ka dhalatay xanuunka safmarka ah ee corona ee faraha ba'an ku haya dalal ka badan 150.
Dalkaas Jarmalkana waxaa ku nool Soomaali badan kuwaas oo qaar ka mid ah la sheegayo in laga helay cudurka Corona.
Maxamed Cabdi Jaamac, oo ku nool magaalada Hamburg ee waddankaas, ayaa markii cudurkaasi laga helay kaddib inooga warramay wada uu maray markii cudurkan lagu sheegayay.
"Isbitaalkii baan tagay dhacaan bay iga qaadeen kabacdi xaafadaan iska aaday oo annagaa ku soo wacayno ayey dhaheen, ileen jawaabta waxa ay qaadanaysaa 24 saacadood, marka waxyar bay kuu dhiibayaan guuntaad iska galinaysaa waad ku celinaysaa, annagaa ku soo wacayno ayey igu dhaheen oo numbar ayey iga qorteen, hadda dhaw bay isoo waceen oo cudurkii baad qabtaa bay igu dhaheen, laba todobaad waa inaad gurigaaga joogtaa oo aadan bixin."
Maxay Reer Galbeedku ka baran karaan dagaalka ay Aasiya kula jirto Coronavirus?
Masaajidda Maka iyo Madiina oo laga mamnuucay Saladaaha jamaacada
Muxuu Trump ugu adkeysanayaa in dawada Maleeriyada lagu tijaabiyo Carona ?
Maxamed ayaa waxa uu inooga warramay calaamadaha uu isku arkay ka hor inta uusan baaritaanka samayn: "Waxaan isku arkay riiraxyo iyo dhuunta oo i xanuunayso, kabacdi hergab inuu yahay baan aaminay, waxaan dareemay wareer, dhegaha oo i xanuunaya, labada dhafoor oo aad ii xanuunaya, tabar darro qufac iyo qandho aan jirkayga ka baxayn." ayuu yiri Maxamed.
"Markasta waxaan dareemayay in waxan uu yahay wax hergab ka wayn ileen hergab weligay afar maalmood ka badan lama xanuunsan, marka waan dareemay waxan inay yihiin wax aan caadi ahayn sidaas darteed baana shaki igu jiray saddexdii maalmood ee ugu dambaysay shaki baa igu jiray sidaas ayaan keentay inaan dhakhtarka aado oo isa soo baaro."
Ra'iisul Wasaaraha Talyaaniga, Giuseppe Conte, ayaa amray in la xiro dhammaan ganacsiyada aanan tooska xiriirka ula lahayn dedaallada lagu doonayo in lagu xakameeyo cudurka coronavirus.
Mas'uuliyiinta ku sugan gobolka uu cudurkaas halakeeyay ee Lombardya ayaa waxa ay ku dhawaaqeen tallaabooyin cudurkaas lagu xakamaynayo oo ay ku jiraan in la joojiyo shaqooyinka aan muhiimka ahayn ee guryaha laga qabto iyo in la joojiyo ganacsiyada barxadaha furan ee todobaadlaha ahaa.
Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa todobaadkii hore waxa ay ka digtay in 70% dadka dalkaas ay suuragal tahay inay qaadaan cudurka coronavirus.
Dhanka kale waxaa sare u sii kacaya tirada dadka uu cudurkaasi ku dhacayo ee ku sugan qaaradda Yurub, iyadoo dowladuhuna ay ku dhawaaqeen lacago ay dhaqaalaha ku kabayaan.
Dunida oo dhan dadka cudurkaasi u dhintay ayaa waxa ay dhaaftay 12,000, kiisaska la xaqiijiyay ee cudurkaasi ayaa haatan ku dhaw 300,000 halkan in ka badan 90,000 qofna ay cudurkaasi ka boksoodeen.
Soomaalidu ha isa soo baarto
Wiilkan Soomaaliga ah ee ku nool dalka Jarmalka ee laga helay cudurka coronavirus ayaa waxa uu u walwalsan yahay Soomaalida kale ee uu ku arkay caalamadaha uu markii hore isku arkay ee misana aan isa soo baarayn.
"Dhibaatada jirta ayaa waxa ay tahay Soomaali badan oo magaalada Hamburg joogta oo gaaraysa 5 ilaa 6 oo maalmahaan xanuunsanaa wada xiriirnay, kuli inta aan dareemayo ayey dareemayaan qof rabo inuu isbaaro ma jirto, marka waxaan dhihi lahaa war heedhe ha la isa soo baaro oo qofka horta ha ogaado waxaan hayo Ilaah baa caafimaad hayee Alxamdullilaahi Rabil Caalamiinee, oo waa in qofka uu ku qanco wixii ku dhaco." ayuu yiri Maxamed.
Xigashada Sawirka, PA Media
Isbitaal gaar loo leeyahay oo ku yaal UK
"Dad badan baan aqaanaa oo kow iyo laba iyo saddex midna aan ahayn oo magaalada ila joogo oo dhalinyara ah oo Soomaali ah oo isnaqaanno oo kuligood wada qandhan oo qufacaya, oo ku dhahayo calaamadahaas lagaa helay annagana waan dareemaynaa aanan rabinna inay isbitaalka aadaan." ayuu ku calaacalay Maxamed Cabdi.
Waa tumaa gabadhii u awood sheegatay Ramla Cali?
Haweeney xaamilo ah oo loo dilay sooryo awgeed
48 Daqiiqadood ka hor
TOOS Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay kiiska Ikraan Tahliil oo in muddo ah maqan
Atariisho caan ah ninkeeda oo loo haysto filim anshax xumo ah
Dadka Shiinaha oo wayneysanaya indhaha!
"Ragga sababy in aan jirkayga ka ganacsado, waa deriskayga, ninka haween kale ama aabo"
Wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Itoobiya iyo madaxwaynaha Canfarta oo baaq diray
Muxuu yahay dhagaxa iftiimaya ee hawada ka soo dhacaya ee Norway?
Ninka keli ah ee ku jira guddiga qoondada haweenka oo sharaxay sababta